Ikhabhinethi yeKona-Indawo yokuPhuma eMantla
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDavid
Fumana amava ekhabhini yokwenyani! Le khabhathi ye-A-Frame ikhutshelwe kude yimbonakalo-mhlaba entle eluhlaza umzuzu omnye ukusuka eButternuts Town Park entle.
Indawo engaphandle inomgangatho omkhulu onefanitshala yangaphandle, ibhedi yangaphandle, indawo yomlilo, i-hammock, iimbono zechibi elinomthombo kunye neehektare zomhlaba ocociweyo ukuba uyonwabele.
Ngaphakathi kukho ikhabhinethi eyakhiwe ngamaplanga, enezinyuko ezijikelezayo ezikhokelela kwindawo ephezulu, ikhitshi eligcweleyo, indawo yomlilo yepropane, kunye nesithuba sokusebenza ukusuka ekhaya kunye ne-wifi.
Ubukho buqala nge-1 kaJanuwari 2022!
Apho ubunewunewu nentlango bubuthelana khona! Le khabhinethi inayo yonke into onokufuna ukuyishiya kubomi bomsebenzi.
Yonwabela indawo yomlilo xa kuba mnyama ukubona iinkwenkwezi ezingakholelekiyo kuquka iimbono ze-milky way kunye nesibhakabhaka esiqaqambileyo sasebusuku. Indawo yangaphandle ikwabandakanya iihektare kunye neehektare zomhlaba ocoliweyo, umbono wechibi elinomthombo, idesika enkulu enebhedi yangaphandle kunye netafile yokutya yangaphandle.
Ngaphakathi kwendlu uya kuhamba kwikhabhathi eyakhiwe ngamaplanga ngokupheleleyo enendawo ephezulu efikelelekayo ngezinyuko ezijikelezayo. Indawo ephezulu yenzelwe ukuba ibe yindawo yokuphumla ngoxolo. Oko kufuneka sitsho, yeyona ndawo ilungileyo yekhabhinethi. Ngaphakathi kukho isitovu sepropane esiya kuthi sifudumeze lonke ikhaya lodwa, igumbi lokuhlambela elisebenza ngokupheleleyo, iwasha kunye nesomisi, ikhitshi, ibhedi egotyiweyo, kunye nebhedi enkulu etofotofo kwigumbi lokuhlala eliphambili. Kukho indawo yedesika kwigumbi lokulala lesibini kunye nelinye kwigumbi eliphezulu.
Ngelixa kungayi kubakho nkonzo kwindawo engqongileyo ngenxa yokuba ukude kangakanani le propati, kukho inkonzo ye-fiber-optic Wifi. Qinisekisa ukuba uvule ukufowuna kwe-WiFi kwifowuni yakho ukuze uqhagamshelane neefowuni!
Ubumelwane busecaleni kwepaki yedolophu yaseButternuts, yenye yezona paki zedolophu ezintle oza kuzibona. Inokufikelela emlanjeni apho unokuloba khona, i-kayak, ukuya kuqubha, i-grill, ukuthatha idiphu, kunye nokunye!
Ipropathi ikude ngenene kwaye esona sixeko sikufutshane yi-Oneonta ekuhambo lwemizuzu engama-30. Indawo oza kuhlala kuyo ngokwenene yindlwana enoxolo nefihlakeleyo. Ukuba ujonge amava ekhabhinethi yokwenyani, le yindawo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- South New Berlin